Wakaalada Wararka Warqaad – Wareegta uu soo saaray madaxweynuhu oo dhaqan qashay.
Wareegta uu soo saaray madaxweynuhu oo dhaqan qashay.
12/09 5:57 pm2 commentsViews: 716
Waxaa maanta dhaqan galay wareegta uu maalma kahor uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud, oo aheyd in aan la xiri Karin gabar Soomaaliyeed oo sheegata in la kufsaday.
Madaxweynaha ayaa waxa uu maalma kahor ka sheegay kulan ka dhacay Xalane in uu balan qaadayo in gabar danbe ee Soomaaliyeed aan xabsi loo dhigi doonin kufsi ay sheegatay.
“Lama xiri doono gabar Soomaaliyeed oo sheegata in la kufsaday. Inta la baarayo banaaka ayeey joogi doontaa,” Madaxweynaha ayaa sidaasi ka sheegay kulanka.
Maanta ayaa waxaa maxkamada derejada koowaad ee gobalka Banaadir ay sii deysay gabar Soomaaliyeed oo sheegatay in wariyaal ay kufsadeen taa oo muujineysa in wareegtadii madaxweynaha la dhaqan geliyay.
Cabdulkadir wadani,	12/09 9:50 pm
Kkkkkkk aw.Xasan gurguurtow ma mugaan ayaad dareentay ? Ceebi labo maahan ee waa miday kugu hayaan garsoorka darajada kowaad & labaad xaashi doqon & xasan wariiri, tan gobalka binaadir & tan racfaanka, 2 nin haka reebin xeer ilaaliyaha daciifka ah ee sabab u ahaa fool xumadaan
Reply Cabdulkadir wadani,	12/09 9:55 pm
Kkkkkkk aw.Xasan gurguurtow ma mugaan ayaad dareentay ? Ceebi labo maahan ee waa miday kugu hayaan garsoorka darajada kowaad & labaad xaashi doqon & xasan wariiri, tan gobalka binaadir & tan racfaanka, 2 nin haka reebin xeer ilaaliyaha daciifka ah ee sabab u ahaa fool xumadaan taagan asalkeedi dunida ku tustay inaadan garsoor lahayn
Tooshka WarqaadTOP: Xildhibaanno ka biyo diidsan inay soo laabtaan wasiiradii Saacid! XOG: Dagaalka Sh/hoose oo ku baahay deegaanno kale iyo cabsida jirta!!! Saraakiisha Kismaayo oo sheegay inay soo qab-qabteen hub iyo dad badan Xaaladda deegaanka Number Konton oo deggan iyo Xiisad kacsan XOG: Dagaalka Sh/hoose oo la ogaaday in ay ku biireen beelo kale! Warbixin: Wal-walka laga qabo soo laabashada wasiiradii hore Kulan musharixiinta & Faroole ku dhexmaray Garoowe oo Fashilmay DAAWO: Tababarka Ciidanka ONLF ee ka dagalama Gudaha Ogadenia XOG: Khasaaraha dagaal beeleedka Sh/hoose oo sii kordhay + Xiisado jira TOOSHKA WARQAAD: Shacabka Kismaayo oo cabsi soo food saartay Faroole: Mooryaan&Tikniko Garoowe la lama soo gali karo–Xiisad kacsan TOP: Musharrax laga celiyay inuu galo Garoowe-ciidamo daacad u ah Faroole DEG-DEG: Imaam Salaad tujinayay oo caawa lagu dhex dilay masjidka. Faroole oo TV-ga Puntland daah furay iyo xog dhab ah oo Warqaad uu helay XOG: DFSomalia oo ku ceebowday xukunka wariyeyaal madax-bannaan Arimaha BulshadaTOP: Xildhibaanno ka biyo diidsan inay soo laabtaan wasiiradii Saacid! XOG: Dagaalka Sh/hoose oo ku baahay deegaanno kale iyo cabsida jirta!!! Saraakiisha Kismaayo oo sheegay inay soo qab-qabteen hub iyo dad badan Daawo Video Qiso naxdin leh gabar Somali ah oo caseeye ah!!! Xaaladda deegaanka Number Konton oo deggan iyo Xiisad kacsan DEG-DEG: Askar isku leysay magaalada Garbahaarey ee xarunta gobalka Gedo Daawo kulankii Musharrixiinta Puntland iyo Madaxweyne Faroole XOG: Khasaaraha dagaal beeleedka Sh/hoose oo sii kordhay + Xiisado jira TOOSHKA WARQAAD: Shacabka Kismaayo oo cabsi soo food saartay Faroole: Mooryaan&Tikniko Garoowe la lama soo gali karo–Xiisad kacsan TOP: Musharrax laga celiyay inuu galo Garoowe-ciidamo daacad u ah Faroole DEG-DEG: Imaam Salaad tujinayay oo caawa lagu dhex dilay masjidka. Faroole oo TV-ga Puntland daah furay iyo xog dhab ah oo Warqaad uu helay XOG: DFSomalia oo ku ceebowday xukunka wariyeyaal madax-bannaan Magacyada maxaabiis ku geeriyootay xabsiga degmada Balcad oo la helay visitor activity monitoring
MaqaaloFAALLO:Ma sara kacnaa misa silac ayaan ku sii jirnaa? Puntland: Labo Gudi, 2 Barlamaan, 2 Doorasho & 2 Xukumad “Warbixin” Sideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay? Somaliya Shilinkaa Sharciga Ka Weyn!!!+Faallo Soomaaliya ma soomaali baa leh misa Zamankiyo wuxuu sido? Wasaarada horumarinta & A/Bulshada : Hogaanka Wasaaradaha Soomaaliya. Dilalka Madaxda Al Shabaab yaa ka dambeeya? Culeys dhig ee mid kale Qaad waa cilad heysata dowlada Soomaaliya. Puntland kana siib kana saar ( Riwaayad taxane ah Qaybtii 1-aad ) Madaxweyne Xasan oo hadal qiiro leh U Sheegey Shacabka Jubooyinka Fanaanad Soomaaliyeed oo ka Tilaab satay Dhaqankena Wanagsan + Sawiro Halkee Ku Tababarteen Kooxdii ka danbeeysay Weerarkii Westgate Sheeko gaaban oo Shakiga iyo isku dirka Soomaalida ka hadleysa UNICEF oo barnaamij wada sheekeysi ah u furtay gabdho Soomaaliyeed oo da’yar Madaxweynaha oo Diraya Hambalyo ku Aadan 59 guuradii ka soo Wareegatay Calan Soomaaliyeed #22306 (no title)Nagala Soo Xariirtaleex banaabaxgacan iyo lug go’andhalinmuuqaalSoomaalilayaabka baaluunkaDaawo Muuqaalka xayawaan dagaalamaya iyo kumanaan dad ah oo daawanayaAxmed MadoobeGaafowQARAXDaawo Video : Hodan C/raxman oo Qurbo joogta Muqdisho hees cajiib ah ku ceebeysay!!!Shaaribaha iyo BakistankufsikubadTarsanSaado-CaliFAYSAL-WARAABE-DHEGAYSOBEEGSIGASh UmulProf ToganeCali Maxamed GeedifoolkaanomudaaharaadthanksgivingXasuuqBAARLAMAANKAgooltuugAbu MuscabmuuqaalGUBASHOMuuqaal: Qarixii maanta ee halakeeyay BoosaasogabarMandellarugcadaa dagaalUMALmuuqaalMusharax Muuse Sh Cumarma dhabaa?BeebayaalbaraaticMUUQAALFaroole-Shirka Maantacaruurwax ka bedel
© Copyright 2013 — Wakaalada Wararka Warqaad. All Rights Reserved